CUA – BMH : hamafisina ny ady amin’ny aretina pesta | NewsMada
CUA – BMH : hamafisina ny ady amin’ny aretina pesta
Misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny alalan’ny BMH sy ny minisiteran’ny Fahasalamana manoloana ny fepetra tokony horaisina amin’ny fisian’ireo aretina eto an-dRenivohitra sy ny fahafatesana mampiahiahy.
Voaresaka amin’izany ny fisian’ny aretina pesta. Nanambara ny talen’ny BMH, Herivonina Durand Derys, fa misy karazany roa ny pesta, ny “bubonique” izay ahitana fivontosana sy ny pesta “pulmonaire” izay misy fivontosana miampy aretin’ny tratra.
Efa olona iray izao no matin’io aretina io teto Antananarivo Renivohitra. Raha natao ny fanadihadiana momba ny niavian’ izany aretina izany, niainga avy any amin’ ny faritra iray nisy ity olona matin’io aretina io izy.
Nentina niakatra taty Antananarivo ny razana , avy eo, maty indray ny vadiny. Mbola nisy maty fanintelony indray taorian’izany izay tsy iza fa ny fianakavian’iretsy maty teo aloha ihany.
Fantatra fa nampidirina tamin’ny hopitaly eto Antananarivo io olona io. Anjaran’ny BMH ny mikarakara ny razana matin’ ny pesta amin’ ny fandevenana azy etsy Anjanahary. Nanamafy ny BMH fa tsy azon’ny fianakaviany alaina ny razana mandritra ny ampolo taony sady tsy azo avadika.
Misy ireo hopitaly mandray ireo olona ahina ho voan’ny aretina ary entanina ny rehetra raha vao misy tranga hafahafa mba hanatona haingana tobim-pahasalama na ny CSBII akaiky azy.
Tsy azo atao ny mihinana fanafody tsy nahazoana alalana avy amin’ny dokotera, indrindra ny “cotrime” fa mety hiteraka fahafatesana. Efa nisy ireo fanentanana eo anivon’ny boriborintany enina eto Antananarivo izay tanterahin’ny BMH amin’izao fotoana izao.
Noho izany, misy ny fampiantsoana ireo sefo fokontany tsirairay ary hamafisina ny tsy fahazoana manary voalavo maty eny rehetra eny fa dorana.
Marihina fa ny voalavo “Ratus Ratus” no tena mitondra io aretina io. Ny olona maty rehetra eto Antananarivo Renivohitra, tsy maintsy mandalo BMH mampilaza ny taham-pahafatesana sy ny antony nahafaty azy mba hisorohana ny fiparitahan’ny aretina. Nentanina koa ny fianakaviana manana ny maty mba hanisy “formol” ny razana mba hikajiana azy ireny sy hiadiana amin’ny areti-mifindra tsy hiparitaka.
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Resaka fako ilay raha 25/02/2021
Henry Douliot: journal du voyage fait sur la côte ouest de Madagascar (68) 25/02/2021
Billet : salutations d’usage 25/02/2021
Chronique : c’est la crise, mais pas pour tout le monde 25/02/2021
Les photos du 25 Février 2021 25/02/2021